Ujeeddada Wada-hawlgalayaashu waa in la aqoonsado kuwa been-abuurka ah, la baabi'iyo, lana dhammaystiro howlaha ku xeeran khariiddada; hadafka dhagar qabayaashu waa inuu si qarsoodi ah u kharribo oo u dilo Wada-hawlgalayaasha ka hor intaanay dhammaystirin dhammaan shaqooyinkooda. Ciyaartoyda looga shakisanyahay inay yihiin Khiyaamo ayaa laga tirtiri karaa iyada oo loo marayo cod aqlabiyad leh, oo ciyaartoy kasta uu bilaabi karo wakhti kasta. Wada-hawlgalayaashu way guuleystaan ​​haddii dhammaan kuwa been-abuurka ah la baabi'iyo ama dhammaan howlaha la dhammaystiro halka kuwa khabiirada ahi ay guuleystaan ​​haddii ay jiraan tiro isla eg oo khaa'inno ah iyo Wada-hawlgalayaashu, ama haddii kharbudaad xasaasi ah aan la xallin.
Intii markii hore lagu sii daayay 2018 fiiro gaar ah oo yar, waxay heshay qulqulatooyin caan ah sanadka 2020 sababo la xiriira caan bixiyayaal badan oo Twitch ah iyo YouTubers oo ciyaaraya. Iyada oo laga jawaabayo caannimada ciyaarta, Dhexdeenna 2 waxaa lagu dhawaaqay Ogosto 2020. Sikastaba, taxanaha la qorsheeyey ayaa la joojiyay bil kadib kooxduna waxay diiradda u saareen hagaajinta ciyaarta asalka ah. Dhexdeenna ayaa dhiirrigelisay xusuusta internetka waxayna ku guuleysteen in badan oo internetka ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Among_Us&oldid=210093"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Maarso 2021, marka ee eheed 00:32.